बेलायतमा अलपत्रको सूचीमा नाम टिपाएका साढे दुई सय नेपाली किन फर्किएनन् ? | We Nepali
नेपालको समय: ०४:२४ | UK Time: 23:39
बेलायतमा अलपत्रको सूचीमा नाम टिपाएका साढे दुई सय नेपाली किन फर्किएनन् ?
दोस्रो चार्टरमा ७५ सिट रित्तै
२०७७ असार १३ गते ६:२२
लण्डन । बेलायतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट दैनिक एक हजारको हाराहारीमा मानिसहरुको निधन हुन थालेपछि धेरै नेपाली आत्तिए । उनीहरुले बेलायतस्थित नेपाली दुतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई उद्धारका लागि हारगुहार गरे । दुतावासले करीब ५ सय नेपाली बेलायतबाट नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको नामावली सरकालाई पठायो । सोही आधारमा सरकारले दुई वटा चार्टर फ्लाइटसहित बेलायतमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धारको मिति तय गर्याे । तर, उद्धारको दिनसम्म आइपुग्दा आधाभन्दा बढी नेपालीहरु नेपाल फर्किनबाट पछि हटे ।
‘बेलायतमा दिनहुँ एक हजार व्यक्तिहरुको मृत्यु भएपछि म आत्तिएँ । कोरोना महामारीको अवस्थामा आमालाई बेलायत घुम्न बोलाएर गल्ति त गरिनँ भन्दै मनमा प्रश्न उब्जन थाल्यो । नेपाल सरकारले पनि बेलायतबाट उद्धार गर्ने नाम संकलन कार्य सुरु गर्याे । मैले पनि आमाको नाम दुतावासमा लेखाएँ । यसबीचमा स्थितिमा परिवर्तन आई कोरोनाबाट नेपाल झनै असुरक्षित लाग्यो’, आमालाई चार्टर फ्लाईटमा नेपाल नपठाउनुको कारण खोल्दै डा.मकुन्द बास्तोलाले भन्छन् ।
उनको जस्तै सोचाई धरै बेलायतमा अलपत्र परेको नेपालीहरुमा देखियो । त्यसको असर दोस्रो चार्टर फ्लाईटमा प्रत्यक्ष रुपमा देखियो । बेलायतबाट नेपाल जान उद्धारका सूचीमा रहेका झण्डै ५ सयमध्ये पहिलो चार्टरमा १ सय ४६ दोस्रो चार्टर फ्लाईटमा ८३ जना यात्रु गरी २ सय २९ जना मात्र नेपाल गए ।
त्यसबाहेक बेलायतका विश्वविद्यालयहरुमा आएका विद्यार्थीहरुले पनि कोभिड–१९ को फैलँदो सन्त्रासबाट सुरक्षित हुन नेपाल फर्किन नाम टिपाए पनि अन्तिम अवस्थामा माइन्ड चेन्ज गरे । दुताबासले नाम संकलन गर्दा र उद्धारको मितिसम्ममा स्थिति ठ्याक्कै फरक भयो । बेलायतमा कोरोना संक्रमण घटने र नेपालमा बढ्ने क्रम देखिएपछि चार्टर फ्लाइटको मंहगो टिकट उनीहरुले किनेनन् । बेलायत पनि विस्तारै खुल्न थाल्यो । दैनिक मृत्युदरमा कमी आइरहेको छ । बेलायतको जनजीवन अब सामान्य बन्दै जान थाल्यो ।
नेपाल सरकारले उद्धारका लागि चार्टर गरेको एकतर्फी प्लेन भाडा ९ सय २० पाउन्ड र नेपालमा फर्किएपछि तथा नेपालबाट बेलायत आएपछि दुवै देशमा १४- १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटले धेरैको मन परिवर्तन गर्न थप मद्दत गर्याे । त्यस्तै, लामो समय परीक्षा स्थगित भएर यहाँ रोकिएका दर्जनौ नेपाली चिकित्सकहरुको परीक्षाको नयाँ मिति तोकियो । त्यसैले उनीहरु कोही पनि उद्धारको फ्लाइटमा गएनन् ।
दोस्रो चार्टर फ्लाइट शुक्रबार दिउँसो ग्याटविक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको जजिरा एयरलाइन्सको ए–३२० एयरबस’ कुवेत ट्रान्जिट हुँदै आज शनिबार काठमाडौं ओर्लिनेछ ।
नेपाल सरकारले बेलायत भ्रमणका क्रममा भिसा म्याद समाप्त भएर रोकिएका, नेपालमा आफन्त गुमाएका, रोजगारी गुमाएर बिचल्ली परेका, अध्ययन पूरा गर्न असमर्थ र जागिरविहीन विद्यार्थी, तालिमका लागि आएका सरकारी कर्मचारी, सेना, परीक्षा दिन आएका चिकित्सक एवं पारिवारिक तथा अन्य जरुरी कामले फर्किनुपर्ने नेपालीका लागि विशेष उडान तय गरेको थियो । विमान भाडा ९ सय २० पाउन्ड तोकिए पनि ९४० पाउण्ड तिर्नपरेको थियो ।
लण्डनस्थित नेपाली राजदुताबासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरनकाअनुसार बेलायतमा संक्रमित र मृत्युदर घटिरहेको बेला नेपालमा भने बढिरहेको कारण अन्तिम समयमा धेरैजसोले नेपाल फर्कने विचार बदलेका हुन सक्छन्।
“अहिलेसम्म जरूरी हुने सबैले फर्किने अवसर पाएको र अब नियमित उडान सुचारु हुनुअघि थप चार्टर उडान हुँदैन”, आरनले भने, ‘नेपाल सरकारले राजदुताबासको पहलमा नेपालीहरुको उद्धार गर्नका लागि दुई चार्टर उडानमा १५८- १५८ गरि ३१६ जना यात्रु नेपाल लैजाने योजना बनाइएको थियो।’ उनकाअनुसार त्यतिले नपुगे तेस्रो चार्टर उडान पनि गर्ने सोच थियो।